Ini ndakatyora WordPress 2.1 | Martech Zone
Ini ndakatyora WordPress 2.1
China, January 25, 2007 Douglas Karr
Zvakanaka, munhu wese akarega kuseka…. Ndinoziva uyu ndiwo musoro wenyaya. Panzvimbo pekuyedza 'kugadzirisa' yangu yekare theme uye yese yekodhi kodhi yandakange ndaisa imomo, ndakafunga kuibvarura zvachose. Saka ingo tsungirira neni kwechinguva apo ini ndichivaka yangu yekutanga theme yeWordPress. Ndiri kuzochengeta iyi tema yakashata kuti ndizikurudzire kuti dingindira riitwe uye kunze uko nekukurumidza. Ndakatanga pairi manheru apfuura!
Ini ndinogona kudzosera mari yangu, Wikipedia?
Matema, Kufungidzira - ikozvino Ambient Kupenya!
Jan 25, 2007 na3:42 PM
Rombo rakanaka. Zvinhu zvose zvakandifambira zvakanaka, asi ndakanga ndakamirira kuparara. Ndinogara ndichifungira kuti chimwe chinhu chichaenda zvakashata pandinovandudza WordPress, asi kusvika zvino haina kumbobvira yaita.
Jan 25, 2007 na4:20 PM
Zvinoitika [kana] ndinoziva kuti zvakamira sei. Rombo rakanaka uye unakirwe nemukana uyu wekudzorera chitarisiko chako uye kunzwa kwako.
Jan 25, 2007 na5:05 PM
Mukuru wekutumira zita 🙂 Mifananidzo yekubatanidza yaive bhagi mushure mekuvandudzwa kwangu kweWordPress, asi neimwe nzira inotsvedza.
Ndinovimba dingindira rako idzva richaita serakashoreka!
Jan 25, 2007 na5:10 PM
Rombo rakanaka Doug. Ndanga ndichirega kukwidziridza kuWordPress 2.1 nekuti ndiri kunetsekana nekutambura zvakafanana.
Ndakaita akati wandei WordPress themes munguva yakapfuura, saka inzwa wakasununguka kundipa mhere kana iwe uchida chero rubatsiro nazvo.
Jan 25, 2007 na6:00 PM
Ini ndinofunga yako "default" theme inotaridzika zvakanaka! Hazvina kutaridzika zvakaipa sezvaunofungidzira. Uye ndinofunga kuti wangoratidza kuti kunyangwe iyo "default" dingindira rinogona kutaridzika rakanaka nekungogadzirisa.
Asi, kuva nedingindira rakasarudzika gadzira chitupa - ndizvo zviri kubhuroga uye isu tese tinoda kuve neyakasiyana inotaridzika bhurogu yatinogona kunyatso ratidza kupasirese!
Ndinotarisira kuona dingindira renyu idzva.
Jan 25, 2007 na6:02 PM
Ini ndinofunga unoreva fodya, ndakasiya makore makumi matatu apfuura kubvuma fodya yenguva nenguva, asi ini handifemere.
Jan 25, 2007 na6:03 PM
Wow - inotyisa rutsigiro. Ndatenda munhu wese! Ini ndinoda chaizvo kuve nyore kwedingindira iri. Ndiri kuenda kunoona kana ndichigona kubatanidza humwe hunyoro mudingindira rangu - rekupedzisira rangu raive rakabatikana zvishoma!
Wow! Iyi ndiyo imwe yakanaka WordPress theme yauri kumhanya !!! Chinonzi chii? 🙂
Haiwa kusvira kwete kuputa fodya, ndasiyawo mabhawa ekusvirawo
Jan 25, 2007 na7:14 PM
Ndinonzwisisa zvizere. Ini saiti yangu itsva ndakanga ndagadzirira kuenda kusvika ndatyorawo dingindira rangu. Kutamba-tamba zvishomanana kwakawedzera zvinhu. Ndaifanira kuivaka patsva. Nguva yese yangu yapfuura - isiri blogging - saiti yaive pasi. Chaizvoizvo, ndakanga ndave mwedzi ungangoita ndisina webhusaiti. Uye ini ndiri webhu bhizinesi mugadziri.
Jan 25, 2007 na7:20 PM
Oh murume! Ndakangorohwa naJohn Chow! Hoo!!!
Jan 26, 2007 pa 5: 44 AM
Ndinoona ichi chakachena kupfuura chekare. Ndinovimba uri kubika chinhu chakachena uye chinoyevedza.